अनलाईन किनमेल गर्नु पहिले यी विषयहरूको बारे निश्चित हुनुहोस्, अन्यथा तपाईं ठगिनुहुनेछ - Technology Khabar
» ताजा समाचार » अनलाईन किनमेल गर्नु पहिले यी विषयहरूको बारे निश्चित हुनुहोस्, अन्यथा तपाईं ठगिनुहुनेछ
Technology Khabar ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार
दशैंको अवसर पारेर नेपाली ईकमर्श कम्पनीहरुले विभिन्न अफरहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ग्राहकहरुलाई अनलाइन किनमेलमा लोभ्याउन ईकमर्श कम्पनीहरुले छुट र अफरका साथ किनमेल गर्न भनिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा, कम्पनीहरुले बिग डिस्काउन्ट, क्यासब्याक, हेभी अफरलगायतका दाबीहरु गरिरहेका छन् ।
यदि तपाईं पनि यो सेल र अफरमामा किनमेल गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने, पहिले यी शब्दहरूको सही अर्थ थाहा पाउनुहोस्, अन्यथा तपाईंले पछि धोका पाउनुहुनेछ।
अनलाइन शपिंग वेबसाइटहरू द्वारा प्रयोग गरिएको र खरीददारहरुलाई आकर्षित गर्नको लागी यो एक सबैभन्दा लोकप्रिय तरिका हो। नामले सुझाव दिए जस्तै, क्यासब्याक अन्तर्गत, खरीदारले उत्पादको मूल्य वा निश्चित रकमको निश्चित प्रतिशत फिर्ता पाउनेछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईले १ हज़ार रुपैयाँको कुनै सामान किन्नुहुन्छ भने तपाईलाई १० प्रतिशत वा १०० रुपैयाँ सम्म फिर्ता हुनेछ।
तपाईंले कति क्यासब्याक पाउनुहुनेछ ?
खरीद गर्नु अघि केहि क्यासब्याक नियम र सर्तहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्दछ। अनलाइन पोर्टलहरूद्वारा प्रस्ताव गरिएको क्यासब्याकहरू प्रायः नियमहरु र सर्त अर्थात टर्म एण्ड कण्डिसनका साथ आउँदछन्। त्यहाँ क्यासब्याक कति छ भनेर जाँच गर्नुपर्छ, किनकि तिनीहरू सामान्यतया माथिल्लो सीमाको साथ आउँदछन्। यस बाहेक, त्यहाँ न्यूनतम खरीद रकमको शर्त पनि रहेको हुन्छ। उदाहरणको लागी, कुनै अफरमा २० प्रतिशत क्यासब्याक देखाउन सक्छ, तर त्यसमा अधिकतम १,००० रुपैयाँसम्मको मात्र क्यासब्याक लिने सीमा हुन सक्छ। त्यसको अर्थ हो जति किनमेल गरेपनि तपाईँले १००० रुपैयाँ भन्दा बढीको क्यासब्याक प्राप्त गर्नुहुने छैन।
तपाईं कहिले क्यासब्याक पाउनुहुनेछ ?
तपाईंले यो पनि थाहा पाउनु पर्छ कहिले क्यासब्याक प्राप्त गर्नु हुन्छ भनेर। कहिलेकाँही यो ३/४ महिनामा फिर्ता हुन्छ। र, क्यासब्याक कहाँ जम्मा हुनेछ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्, के तपाईं तिनीहरूलाई तपाईंको बैंक खाता वा वालेटमा लिन सक्षम हुनुहुनेछ ? किनकि प्राय जसो कम्पनीहरूले उनीहरूको अनलाइन वालेटमा मात्र क्यासब्याक दिने प्रस्ताव गर्छन्। यस कारणले गर्दा, तपाईं उही साइटबाट किनमेलको क्रममा त्यो क्यासब्याक प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
नो कस्ट वा जिरो कस्ट ईएमआई
कतिपय अनलाईनहरुमा नो कस्ट ईएमआईको सुविधा दिईने हुन्छ। तर नो कस्ट ईएमआई साथ किनमेल गर्दा तपाईँले सामानको मूल्य भन्दा अधिक तिर्नुपर्ने हुन्छ। नो कस्ट ईएमआई अन्तर्गत किनमेल गर्दा सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ।
कस्ट ईएमआई अधिक सामान बेच्नको विधि
कस्ट ईएमआई अधिक सामान बेच्नका लागि एक विधि हो। कुनै मूल्यको ईएमआई नहेरी कुनै पनि सामान किन्न हतार नगर्नुहोस्, यसको बारेमा राम्रोसँग पढ्नुहोस्। छुटको रुपमा दिईएको रकमलाई बैंकले ब्याजको रूपमा फिर्ता लिन्छ। नो कस्ट ईएमआई योजना सामान्यतया ३ तरीकाले कार्य गर्दछ। पहिलो तरिका नो कस्ट ईएमआई पूर्ण लागतमा उत्पादन किन्नु हो। यसमा कम्पनीहरूले ग्राहकलाई दिईएको छुटलाई ब्याजको रूपमा दिन्छन्। दोस्रो तरीका यो हो कि कम्पनीले पहिले नै उत्पादनको मूल्यमा ब्याज रकम समावेश गर्दछ। उही समयमा, त्यहाँ तेस्रो तरीका भनेको जब कम्पनीको कुनै सामान बेचिंदैन, तब यसलाई हटाउन कुनै लागत नो कस्ट ईएमआई प्रयोग हुन्छ।
छुट वा डिस्काउन्ट
फेस्टिवल सेलमा अनलाइन शपिंग वेबसाइटहरूमा कम्पनीहरूले ८० प्रतिशतसम्म छुट दिने दावी गरिरहेका हुन्छन्। तर यो छुट केवल केहि उत्पादनहरूमा मात्र रहन्छ। अन्य उत्पादनहरूमा छुट बढी नहुन सक्छ। सामान्यतया ७०/८० प्रतिशत छुट फेशनका उत्पादनहरूमा दिइन्छ। यस बाहेक कम्पनीले यसलाई पुरानो स्टकमा सामान रहेमा पनि अधिक छुट दिन्छ। यस्तो अवस्थामा, उच्च छुटको साथ केहि खरीद गर्नु अघि, यसलाई राम्रोसँग जाँच गर्नुपर्दछ।
जाँच आवश्यक छ
ठूलो छुटको प्रलोभनमा पर्न अघि, यो सहि उत्पादन हो वा होइन जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईं केहि खरीद गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले यसको मूल्यमा नजर राख्नुहोस्। साथै, उत्पादन खरीद गर्नु अघि धेरै वेबसाइटहरूमा मूल्यहरू तुलना गर्नुहोस्।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार